ဓါတ်ပုံအရွယ်အစား လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများ | CarsDB
ဓါတ်ပုံအရွယ်အစား လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများ
MyanmarCarsDB.com ကိုအသုံးပြုပြီး ကားကြော်ငြာတင်တဲ့အခါ ဖုန်းမှာပါဝင်တဲ့ Camera ကိုအသုံးပြုပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တင်တတ်ကြပါတယ်.။ ဖုန်း Camera ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဓါတ်ပုံရဲ့ Size ဟာ MyanmarCarsDB မှ ခွင့်ပြုထားတဲ့ 1 MB ကိုကျော်လွန်နေတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်.။ အဲဒီအတွက် ဓါတ်ပုံတင်ရာမှာ အဆင်ပြေစေရန်နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.။
နည်းလမ်း (၁) ဓါတ်ပုံ Resolution ကိုလျှော့၍ ရိုက်ကူးခြင်း
ဓါတ်ပုံစတင်ရိုက်ကူးစဉ်ကတည်းက Resolution ကိုလျှော့၍ ရိုက်ကူးခြင်းဖြင့် ဓါတ်ပုံရဲ့ Size ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်.။ Camera > Settings ထဲကို ဝင်ပြီး Resolution ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်.။
နည်းလမ်း (၂) Photo Resizing Apps များကို အသုံးပြုခြင်း
နောက်တစ်နည်းကတော့ ရိုက်ကူးပြီးဓါတ်ပုံများကို Size သေးငယ်စေရန် Apps များအသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.။ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Application များကို အောက်ပါ Link များမှတဆင့် သွားရောက်၍ Download ပြုလုပ် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.။
Reduce Photo Size >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shoozhoo.imageresizer&hl=en
Resize Me! >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xnview.XnResizeLite&hl=en
Reduce Photo Size >> http://www.1mobile.com/reduce-photo-size-85457.html
Resize Me! >> http://www.1mobile.com/resize-me-785688.html
Simple Resize >> https://itunes.apple.com/en/app/simple-resize/id327776379?mt=8
Resize Image >> https://itunes.apple.com/us/app/resize-image/id409547517?mt=8
MyanmarCarsDB.com ကိုအသုံးပွုပွီး ကားကွျောငွာတငျတဲ့အခါ ဖုနျးမှာပါဝငျတဲ့ Camera ကိုအသုံးပွုပွီး ဓါတျပုံရိုကျတငျတတျကွပါတယျ.။ ဖုနျး Camera ကိုအသုံးပွုတာဖွဈတဲ့အတှကျ ဓါတျပုံရဲ့ Size ဟာ MyanmarCarsDB မှ ခှငျ့ပွုထားတဲ့ 1 MB ကိုကြျောလှနျနတောမြိုးတှေ ရှိတတျပါတယျ.။ အဲဒီအတှကျ ဓါတျပုံတငျရာမှာ အဆငျပွစေရေနျနညျးလမျးမြားကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ.။
နညျးလမျး (၁) ဓါတျပုံ Resolution ကိုလြှော့၍ ရိုကျကူးခွငျး
ဓါတျပုံစတငျရိုကျကူးစဉျကတညျးက Resolution ကိုလြှော့၍ ရိုကျကူးခွငျးဖွငျ့ ဓါတျပုံရဲ့ Size ကို လြှော့ခနြိုငျပါတယျ.။ Camera > Settings ထဲကို ဝငျပွီး Resolution ကို လြှော့ခနြိုငျပါတယျ.။
နညျးလမျး (၂) Photo Resizing Apps မြားကို အသုံးပွုခွငျး
နောကျတဈနညျးကတော့ ရိုကျကူးပွီးဓါတျပုံမြားကို Size သေးငယျစရေနျ Apps မြားအသုံးပွုခွငျး ဖွဈပါတယျ.။ အသုံးပွုနိုငျမယျ့ Application မြားကို အောကျပါ Link မြားမှတဆငျ့ သှားရောကျ၍ Download ပွုလုပျ အသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ.။
Posted at: 20-01-2015 16:33 PM